Madaxwayne Muuse Biixi oo ka Baaqday Shir uu kaga qaybgali lahaa Dalka Sweden , Balse Maxaa Baajiyay ? • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Muqdisho (OWN)-Dowladda Sweden ayaa war kasoo saartay warar maalmihii ugu dambeeyay la isla dhex marayay oo ku aadan inay dowladda Sweden u diiday madaxweyne Biixi inuu safar ku tago magaalada Stockholm.
Wararka ayaa sheegaya in socdaalka madaxweyne Biixi ku tagi lahaa Caasimada Sweden uu La Xidhiidhay ka qeyb galka DOOD ku saabsaneyd sida Somaliland ay ku heshay nabadda iyada oo ku taala gobol colaado badan ay ka jiraan.
Sida wararka aan ku heleyno warqad loo soo diray Madaxwayne Muuse Biixi oo uu shirka uga qeygali lahaa ayaa waxaa ku qorneyd in uu khudbad ka jeedin lahaa kana hadli lahaa mowduucaas.
Hayeeshee markii ay warqaddaasi soo baxday ayaa la xaqiijiyay in Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay la Xidhiidhay Safaaradda Sweden ee Nairobi iyo Wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas.
Socdaalka Muuse waxaa abaabulayay Dadka ka soo jeeda Somaliland ee ku nool dalkaas iyo xildhibaan ka mid ah Guddiga saaxiibada Baarlamaannada Somaliland iyo Sweden oo lagu magacaabo Magnus Oscarson.